Habka Ugu Fudud Ee Adkaysigu Kuugu Horseedi Karo Furaha Guusha - Xogside-news
Home BARNAAMIJYADA CIYAARAHA Habka ugu fudud ee adkaysigu kuugu horseedi karo furaha guusha
Habka ugu fudud ee adkaysigu kuugu horseedi karo furaha guusha
Jean Lacoste wuxu ku dhashay dalka Faransiiska, waxaana uu ahaa xidigihii caanka ku noqday kubbada Teniska intii u dhaxaysay 1920-1930. Wakhtigii uu bilaabay Teniska wuxu ahaa nin aan aad u aqoon teniska (khashiin) waxana ku qosli jiray saaxaiibadii , iyagoo u bixiyay ciyaar xumaanta awgeed Yaxaas.
Dacaayadda saaxiibadii iyo xataa naanaysta Yaxaaska ee ay ugu yeedhi jireen may niyad jebin waxaana uu ku dadaalay inuu noqdo xidig caan ku ah kubbada Teniska. Mr.Lecoste waxa loo aqoonsaday ciyaartowga dunida ugu wanaagsan Teniska labadii sano ee 1926 iyo 1927 oo isku xigay. Halka saaxiibadiina midkoodna aanu gaadhin heerkaasi.
Sanadkii 1932 ayuu ka fadhiistay ciyaaraha isla wakhtigaasi ayuu sameeyay shirkad ka ganacsata Dharka ciyaaraha, Astaanta ganacsiga shirkadda (Trademark) ayuu ka dhigtay Yaxaaskii lagu dacaayadayn jiray. Saaxiibadii inta badan odhan jiray kuma fiicnid mana baran kartid ciyaaraha ayuu shirkadiisa 70%, shaqaale uga dhigay. Adkaysiga ayaa guusha lagu gaadhaa ha ka niyad jebin kelmadaha kaaga imanaya saaxiibada wakhtiga aad hayso wadada guusha.
Previous articleWaxay U Shegeen Bilo Yar Inuu Noolaanayo!
Next articleSaamaynta sadaqadda niyada wanaagsan lagu bixiyo leedahay
Tallaalka Xanuunka Covid-19 Oo Ka Socda Gobolka Hawd